Taliska ciidamada maraykanka ee africom oo warbixin kasoo saaray duqayn ka dhacday Jilib - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Taliska ciidamada maraykanka ee africom oo warbixin kasoo saaray duqayn ka dhacday Jilib
February 18, 2020 Duceysane516
Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Africa AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Maraykanka lagu diley mid ka mid ah dagaalamayaasha Alshabaab oo ku sugnaa degmada Jilib.
Miguel Castellanos Ku xigeenka hawlgalada Africom ayaa sheegay in dagaalayaasha al-Shabaab ay qayb ka yihiin kooxaha argagaxisada ah ee dunida kajiro ayna doonayaan in xoojiyaan weerarada ay kula dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in duqeynta ay iska kaashadeen ciidamada Maraykanka iyo ciidamada dowlada Soomaaliya haatana la qiimaynayo in waxyeelo ka soo gaartay duqeyntan dad rayid ah.
Dhowaan ayaa waxaa duqeyn ay ciidamada Maraykanka ka geysteen duleedka magaalada Jilib waxaa waxyeelo isugu jirtey dhimasho iyo dhaawacba ay ka soo gaareen qoys Soomaali ah oo xilligii duqeynta ay dhacaysay ku sugnaa gurigooda.
Xil ka qaadis lagu sameeyay taliyaha booliska degmada wadajir
Dhuusamareeb:baadi goob loogu jiro nin walaalkiis dilay
December 18, 2019 Duceysane
Sawiro:Maalinta Naafada Aduunka oo Muqdisho laga xusay
December 3, 2016 Duceysane